Malta Tourism Kuita Kufamba Kunyore kune Vashanyi kubva kuUSA
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Malta Kuputsa Nhau » Malta Tourism Kuita Kufamba Kunyore kune Vashanyi kubva kuUSA
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • Hospitality Industry • Malta Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Malta Tourism Kuita Kufamba Kunyore kune Vashanyi vanobva kuUSA - vanoonekwa pano iValletta
NeChishanu, Chikunguru 23, 2021, iyo Malta Tourism Authority yakasaina chibvumirano neVerifly chakanangana nekupa mhinduro isina kunetsa kune vashanyi vanobva kuUSA, vachienda kuMalta. VeriFLY yakavanzika-centric dhizaini inovimbisa iyo data yemushandisi yakachengetedzwa uye inongoshandiswa chete kuchinangwa uye nenguva yenguva inodiwa yekugutsa zvido zvekufamba.
Vafambi vanobva kuUS kuenda kuMalta vachave nemukana wekuona hukama hwavo uye nekupa zvimwe zvinyorwa.
Iyo VeriFLY app inobatsira kudzikisira iyo COVID-19 jekiseni, zvinyorwa zvinyorwa, uye inoratidza mhedzisiro nenzira yakajeka, yekuverenga-inoshamwaridzika nzira.
VeriFLY ine vanopfuura mamirioni 1.5 vashandisi vanoshanda pasirese.
Zvakare, vashandisi veVeriFLY vanochengetedza kudzora kwakasimba pamusoro pekuti sei, riini, uye ndiani ruzivo rwavo rwunogovanwa. Ikozvino nevanopfuura mamirioni 1.5 vashandisi vanoshanda pasirese, VeriFLY ndiyo yepasirose yekutanga yakagamuchirwa dhijitari chikwama chakagadzirwa kubatsira vafambi uye vanoenda kumitambo nekukurumidza uye zvakachengeteka kusangana nekwavari kuenda COVID-19 zvinodiwa.
Vafambi vanobva kuUS kuenda kuMalta vanozove nemukana wekuona hukama hwavo uye nekupa mamwe magwaro, sezvinodiwa neMalta Health Authorities, kuburikidza neiyo VeriFLY app iyo inobatsira kudzikisira jekiseni re COVID-19, magwaro kusimbiswa, uye kuratidza mhedzisiro yakajeka , tsika inofarira kuverenga.
Mushure mekugadzira chimiro chakachengeteka pane yavo nhare mbozha, vafambi vanoisa ruzivo rwejekiseni uye zvimwe zvinyorwa sekudikanwa zvakanangana neVeriFLY app. Iyo VeriFLY app ichaona kuti ruzivo rwevatakuri rwunowirirana nezvinodiwa neMalta uye inoratidza yakapusa kana kutadza meseji. Kutevera izvo, iye mutyairi anozotungamirwa kuzadza iyo Passenger Yekutsvaga Fomu yekupinda muMalta.
Iyo VeriFLY app, inowanikwa paGoogle Play uye neApple App Store, ichagonesa vashandisi kumisikidza yavo "Rwendo rweMalta" kupfuura, iyo inobatanidza izvo zvinodiwa yekupinda muMalta, Yakarongedzwa mune yekushandisa-inoshamwarisisa yekutarisa, mushure mekupedza zvese zvinodiwa zvinodiwa
"Chibvumirano ichi chinoratidza kugona kweMalta kukurumidza kuchinjika kumatambudziko matsva ane chekuita nekufamba. Iyo VeriFLY app ichashanda sechinhu chakakosha chishandiso chekuchengetedza runyararo rwepfungwa kumaAmerican uye neMalta hutano hweveruzhinji. Ticharamba tichishanda nesimba kuvimbisa kuti chikamu chezvekushanyirwa chemuno chinoteedzera nzira yekudzora zvine mutsigo uye zvine mutsigo, ”rakatemerwa Gurukota rezveKushanya neKuchengetedzwa Kwevatengi Clayton Bartolo.
"MTA inodada kusvika pachibvumirano ichi neVeriFLY, izvo zvinozoita kuti zvive nyore kuti vashanyi vanobva kuUSA vashanyire Malta, nekupa shopu imwe chete kuti vashanyi vaendese mapepa ese anodiwa vasati vaenda. Izvi zvinoreva kuti vashanyi vanoenda nerunyararo rwepfungwa kubva kunhandare dzavanobva, vachiziva kuti mapepa avo ese akarongeka, nekudaro vachitanga zororo ravo kubva panguva yavanokwira ndege, "akadaro MTA CEO Johann Buttigieg, achiwedzera kuti chibvumirano ichi, veMalta Authorities vari kutsigira zviri pamutemo kushandiswa kweVeriFLY kuitira kupinda munyika.